अनु मलिक पथ’मा कालीप्रसाद: गीत हिट, तर चोरीको ! – List Khabar
Home / मनोरंजन / अनु मलिक पथ’मा कालीप्रसाद: गीत हिट, तर चोरीको !
admin December 1, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 47 Views
काठमाडौंः यति बेला सामाजिक संञ्जालहरूमा गायक तथा संगीतकार कालीप्रसाद बाँस्कोटाको नयाँ गीत ‘सुन बाटुली’ निकै चर्चामा छ। चर्चा चाहिँ सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक छ।उनलाई भारतीय संगीतकार एआर रहमानको बलिउड गीत ‘गेन्दा फूल’को संगीत चोरी गरेको आरोप लागेको हो।
यसअघि पनि उनको गीत ‘इन्ष्टाको फोटो’ चोरी गरिएको भन्ने उनलाई आरोप थियो। उनले फ्रेन्च गीतबाट संगीत मात्रै होइन शब्द समेत चोरेको गीत सुन्दा बुझ्न सकिन्थ्यो। निकै आलोचना भएपछि उनको सो गीत युट्युबबाट हटाइएको थियो। पछि फेरि पोष्ट गरियो।तर उनलाई एक पटक वा दुई पटकसम्म मात्र चोरीको आरोप लागेको होइन। उनका थुप्रै गीतहरूलाई चोरीको आरोप लागेको छ।
‘मन्जरी’ फिल्मको ‘मन यो मेरो हजुर’ गीत, फिल्म ‘शोर इन द सिटी’ को ‘साएबो’ नामको गीतसँग हुबहु मिल्छ। उनको अर्को हिट गीत ‘ठमेल बजार’ पनि विवादमुक्त हुन सकेन। अघिल्लो वर्ष फिल्म ‘डमरुको डन्डीबियो’का लागि ‘तितेपाती तितेपाती’ कम्पोज गरे।तर त्यो गीतलाई पनि चोरीको आरोप लाग्यो। सधैं विदेशीको गीतबाट ‘इन्स्पायर्ड’ हुने कालीलाई यो गीतमा नेपाली गीत नै चोरी गरेको आरोप लाग्यो। गायक प्रकाश पौडेलले ‘तितेपाती तितेपाती’ बोलको गीत २०५७ सालमा रेकर्ड भएर अर्को वर्ष नै सार्वजनिक भएको दावी गरेका थिए।
गायक बाँस्कोटा भने आफूले चोरी नगरेको बताउँछन्। ‘पहिलेको कुरा अहिले नगरौं, अहिलेको गीत भने चोरी गरेको हैन’, सुन बाटुलीलाई इङ्गित गर्दै उनले भने।गीतमा एउटै बिट भने भएको उनले स्‍वीकारे। भने, ‘बिट एउटै भएर उस्तै उस्तै जस्तो लागेको हो।’
प्रायः गीतमा चोरीको आरोप खेपेका बाँस्कोटाले श्रोतालाई नै दोष थुपारेका छन्। ‘केही मिलेको गीतलाई चोरेको भन्छन्, हाम्रा श्रोताको संगीत बुझाइ नै कमजोर छ’, उनले भने।
बारम्बार चोरीको आरोप लागेकाले आफू यस्ता कुरामा मौन नै बस्ने गरेको पनि बाँस्कोटाको भनाइ छ। उनले भने, ‘कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि लाग्दिनँ, कान ठाउँमै छ, छाम्छु बस्छु।’
बारम्बार चोरीको आरोप लाग्ने गरेपछि उनीमाथि शंका भने पक्कै उब्जिएको छ- ‘कतै काली, अनु मलिक पथमा त छैनन्?’ गीत हिट दिने तर सृजना अर्कैको हुने
Previous बिदेश बाट फर्किने नेपालीहरु होसियार ! त्रिभुवन विमानस्थलले जारि गर्यो यस्तो सुचना
Next चितवनमा कसैले श’क्ति प्रर्दशन गर्दैमा प्रचण्डलाई फरक पर्दैन : रेनु दाहाल